Ibrahima Konate Oo Afka Furtay: "Telefoonkaygii Meel Walba Waa Laga Soo Wacayaa, Xataa Anigoo Daallan, Hurda..." | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaIbrahima Konate Oo Afka Furtay: “Telefoonkaygii Meel Walba Waa Laga Soo Wacayaa, Xataa Anigoo Daallan, Hurda…”
Ibrahima Konate Oo Afka Furtay: “Telefoonkaygii Meel Walba Waa Laga Soo Wacayaa, Xataa Anigoo Daallan, Hurda…”
March 29, 2021 Abdiwahab Ahmed
Difaaca kooxda RB Liepzig ee Ibrahima Konate ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wararka sheegaya in uu tegayo Liverpool, waxaana uu cabasho ka muujiyey telefoonkiisa oo si xidhiidh ah meelo kala duwan looga soo garaacayo.
Laacibkan oo ku mashquulsan kulamada xulka qaranka Faransiiska ee da’doodu ka hoosayso 21 jirrada, ayaa waxa uu saaka qabsaday warbaahinta dunida iyadoo la sheegay in uu qarka u saaran yahay in uu ku biiro Liverpool.
Warbaahinta Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa gellinkii hore ee Isniintii maanta shaaciyey, in Ibrahima Konate uu yahay bartilmaameedka koowaad ee Liverpool ee suuqa xagaaga ee soo aaddan, isla markaana ay lacag gaadhaysa 30 milyan oo Gini kaga soo iibsanayso RB Leipzig, si uu u xalliyo dhibaatada xilli ciyaareedkan kaga habsatay difaaca, iyadoo ay wali dhaawacan yihiin Virgil van Dijk, Joe Gomez iyo Joel Matip.
Ibrahima Konate oo waqtigan ku sugan waddanka Hungry oo uu xulka qaranka Faransiiska ee U21 kaga qayb-gelayo kulamada da’yarta tartanka Euro.
Si kastaba, laacibkan ayaa ka hadlay wararka sheegaya in uu tegayo Liverpool, waxaanu shaaciyey in uu telefoonkiisu wareeriyey iyadoo dadka oo dhan ay soo weydiinayaan arrintan.
Konate oo u warramay wargeyska L’Equipe ayaa yidhi: “Waan soo toosay, waxaanan arkay telefoonkayga oo meel walba laga soo wacay. Waxaan doonay in aan u sheego, anigoo leh, ‘waaryaadha, shalay ayaan ciyaaray, waan daallanahay, kaliday aan ahaado e idaaya.”
Isagoo sii sharraxyaa waxa ka jira warkan, waxa uu Ibrahima Konate yidhi: “Anigu xataa ma daawanin warkan. Haddana dareenkayaga ma siin karayno, waxa jira kulamada tartanka Euro iyo in aan ku laabto kooxdaydii. Kuwaas ayaan diiradda saarayaa, mana fiirinayo waxyaabaha dibedda ka socda.”